Mpilalao rugby fahiny, mpanazatra, mpitantana : « Aoka tsy hahemotra intsony ny fifidianana » | NewsMada
Nivoaka amin’ny fanginany. Naneho ny heviny tetsy Analakely omaly, ireo solontenan’ny mpilalao tranainy sy mpanazatra ary ny mpitantana klioba eto Analamanga, eo amin’ny taranja Rugby. Niompana amin’ny resaka fifidianana ny ho filohan’ny federasiona ny fanehoan-kevitr’izy ireo.
Tsy te hiaina savorovo intsony. « Mahatsapa sy malahelo izahay fa mety ho potika indray ny rugby Malagasy, tsy afa-mipetra-potsiny amin’izao anefa izahay, tena nilona tanteraka tamin’ity taranja ity an-taony maro. Tokony hatao amin’io zoma 27 janoary io ihany ny fifidianana. Betsaka ny fahavoazana ho antsika raha sanatria ka tsy raikitra izany. Anisan’izany ny fiatrehana ny Aroi amin’ny volana marsa sy ny Can 1B ho an’ny sokajy junior, ho tanterahana amin’ny volana avrily », hoy ny mpitondra teny, Rakotoarison Florent Marcel, niaraka tamin-dry Rakotomavo Philippe, Ramorasata Cressan, Mamihaga. Manahy ny hiverenan’ny tamin’ny 2002 izy ireo satria niala an-daharana ny akamaroan’ireo mpitantana tamin’izany.
Tsy hidiran’ny resaka politika…
Nifampiantso ary niara-nivory tamin’ireo mpilalao ankehitriny, mpanazatra sy ireo mpitantana klioba ireto mpilalao fahiny ireto ary nanao izany fanambarana izany. Nandinika sy niara-nihevitra manoloana izao savorovoro mitranga eo anivon’ny tontolon’ny rugby eto amintsika izao. Eo koa ireo vaovao samihafa nitranga tamin’ny haino aman-jery. Nahitsy izy ireo nilaza fa misy zavatra mifanohitra ny miseho ankehitriny ka tsy azo ekena. Teo koa ny tsy faneken’izy ireo ny hampidirana politika eo anivon’ny tontolon’ny lavalava. « Manana ny hasiny ny rugby malagasy ka tsy azo hampidirana resaka politika na ho entina an-dalambe, Eny ny an-kianja filalaovam-baolina ihany ny sehatra malalaka ho an’ny mpanao rugby », hoy ihany izy ireo.
Ankoatra izany, tsy miandany amin’ny kandidà iray ary tsy mbola nitsangana toa izao izy ireo hatramin’izay raha tsy noho ity tranga miseho momba ny olan’ny rugby ity.